Iindaba zesiXhosa, 13 Eyokwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 13 Eyokwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 13/03/2019
Indumezulu Gospel show, Ungashiyeki ngemva
Sele linwenwela mbombo zone zelizwe loMzantsi Afrika ifuthe lomyhadala womculo wokholo oququzelelwa lijelo lasekuhlaleni i-Zibonele FM. Indumezulu Gospel Show ngumxhamsholo wanyaka-nanyaka apho kukhwetywa khona iindumasi zeemvumi zokholo zeli lizwe kwakunye nezo zizinze kweli phondo leNtshona Koloni zize zonwabise ngoncuthu lweengoma abalandeli beli jelo. Kulo nyaka lo myhadala uzakubanjelwa eLuzuko cebu kuhle eLower Crossroads kwicawe yaseShekinah kambe kuthi imipoposho kumaphephandaba kwakunye nezikhululo zikamabonwakude malunga nawo kananjalo, utsale umdla nakubantu abazinze kwiphondo leMpuma Koloni neGauteng….Umanejala wecandelo loqeqesho nophuhliso eZibonele FM unkosazana Ntebaleng Shete uthi sele bequle baligangatha.
Wonzakele ufundi wase Rusthof Secondary
Ungeniswe esibhedlele umfundi othe walixhoba lokuhlatywa kumasango esikolo. Umfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo iRusthof Secondary ubalekiselwe esibhedlele kulandela ukuhlatywa kwakhe kwinto ekurhanelwa ukuba ibikukungcakaza. Lomfundi webanga lesithandathu kutyholwa ngokuba wohluliwe kulomngcakazo waze wagunyazisa ukunikwa imali yakhe kumfundi webanga lesixhenxe, nto leyo ikhokelele emlweni. Othethela isebe lezemfundo ephondweni uJessica Shelver uthi bothukile sesisiganeko kwaye bazimisele ukufikelela kwingcambu yonobangela wokuhlatywa kwalomfundi. Uthi isikolo sizakuthatha iiqathango efanelekileyo yokohlwaya eyisebenzisayo. Esi sisiganeko sesibini sokuhlatywa komfundi kuleveki sikuyo kweliphondo.
Kulindeleke umphathiswa wezolimo abhentsise ezolimo kweli lentshona koloni
Umbutho wamafana kwelilizwe loMzantsi Afrika uthi umphathiswa wezolimo kweli umnumzana Senzeni Zokwana makabhentsise izicwangciso zikarhulumente zokuzisa inguqu kuqoqosho lezolimo kweliphondo leNtshona Koloni. Umphathiswa uZokwana namhlanje kulindeleke ukuba adibane namafama antsundu kwingingqi yaseStellenbosch nalapho umba ophambili kulendibano izakuba ngumcimbi otshisi bunzi wokubuyiselwa komhlaba kubaniniwo. Usihlalo walombutho kweliphondo uIsmael Motala uthi umngeni abajamelene nawo bengamafama antsundu kukuba abathathelwa ngqalelo ngenxa yokuba eyabo imihlaba imincinci kuneyondlebe zikhanyilanga, kwanokufikelela kubuxhakaxhaka balemihlaokusengumngeni kulamafama.
Kuyasokoleka ngokombane kumasipala iLangeberg
Konakele iziseko ezingundoqo eZolani eAshton kumasipala iLangeberg eBoland kulandela imvula emandla yangomvulo. Omnye wabahlali uGift Matroos uthi ezi mvula beziphelekwe kukutshawuza kombane nekurhaneleka ukuba wonakalise iintambo zombane. Abahlali bathi bacela uncedo nanjengoko bengenazindawo zokufihla iintloko,umbane wokupheka kwakunye nokuvalwa kwezinye iindlela ngenxa yomonakalo. Bathi konke okungaphakathi emakhayeni abo konakele kuquka ukutya kwakunye neempahla zokunxiba.
bungciphekweni ubomi bezithuthi zeeTaxify nooUber
Amapolisa ephondo leNtshona Koloni aqhuba uphando malunga neziganeko zokuphangwa kwabaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke i-Uber neTaxify kweli leKapa. Kwimpela-veki ephelileyo kubanjwe amanina amabini ekukholeleka ukuba ayamene nezenzo eziliqela zokuphangwa kwezithuthi zeUber neTaxify. Kusenjalo, sele ebekwe kwikhaya lakhe lokugqibela umqhubi weTaxify ohlatywe wabhubha kweli leKapa. Omnye wabaqhubi beTaxify uthi ubanedyudyu rhoqo xa esiya kulanda umntu nanjengoko engazi ukuba uyakufika aqubisane nayiphi na ingxaki…Taxify Driver… Uthi ukhe waqweqwediswa ngamadoda amathandathu nalapho amane kuwo ayexhobile aza amnyanzelisa ukuba aye kutsala yonke imali yakhe ebhankini kananjalo eba nezinto zakhe.